Internet Ministries - Kubata ne 21st Century Net
Kubata ne 21st Century Net
Internet Ministries yakatangwa muna May 1, 1995. Internet Ministries inopa machechi akawanda uye nhamba dzisingagoni kuverengwa dzevaKristu uye vakarasikirwa mweya nemashoko uye mabhuku pamusoro paKristu nechechi yake. Shoko raMwari rinowanikwa kune ani zvake paInternet, uye maBhaibheri edu ari paIndaneti ari kuverengwa nevanhu vari munyika dzinorambidza kuverengwa kweMagwaro Matsvene. Tinopa maBhaibheri eIndaneti muChirungu, Spanish, Russian, uye Vietnamese. Izvi zvinosanganisira kopi yeKing James Version, American Standard Version, uye Revised Standard Version. Dzidzo dzeBhaibheri dziripamusoro dzakapiwa kune vasiri vaKristu uye vaKristu. Dare redu reBurletin Boards rinopa ruzivo rwakakosha pamusoro pemashoko uye zviziviso zvekereke dzose dzaKristu pasi rose.
Internet Ministries inopa Nhoroondo dzepasi pose dzekereke dzaKristu, Universal Ubatanidzwa hwevaKristu, Zvikoro uye Academy, Makunivhesiti, Masangano eBhaibheri uye Zvikoro zvekuparidza, Hama dzekubudiswa nemagazini, mabhuku mabhuku echiKristu, machechi ane mawebhu paIndaneti, neChinyorwa cheMabasa makereke aKristu.
Chimwe chezvizivo zvinozivikanwa kunze kwemashumiri zvakazozivikanwa neInternet Community kuburikidza nechechi -of-Christ.org yakadai se World World School, Roadmap Bible Series, Lads ku Vatungamiri, Lambert Book House, Project USA Nhasi, World Christian Broadcasting, Mashoko e Life Radio Ministry, Faulkner University, nevamwe vakawanda.
Internet Ministries yakapa webhu kune dzimwe ungano uye mahurumende akawanda munyika yose vasina mari inodiwa kukurudzira Evhangeri yaKristu paInternet. Ishe vanoda Internet Ministries vacharamba vachiita zvakanakisisa kushumira machechi aKristu uye kukurudzira IEvhangeri yeEndaneti.
Ndinokutendai nokuda kwekutsigira kwako kunamatira.